Home » Lahatsoratra farany farany » Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana » Ny Fizahantany Vaovao any Torkia dia mifantoka amin'ny fampakaram-bady
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Turkey Breaking News
Ny Wedding Tourism dia manome tombontsoa ara-toekarena isan-karazany ary mandray anjara ara-toekarena amin'ny toerana haleha sy ny singa tsirairay ao amin'ny sehatry ny fizahantany.
Rehefa manomboka manandrana miverina amin'ny COVID-19 ny firenena, dia nitodika tamin'ny fizahan-tany fampakaram-bady i Tiorkia.
Ny mpikambana iray ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Fikambanan'ny Tiorka Travel Agency dia nilaza fa ny fampakaram-bady dia mahasoa kokoa noho ny karazana fizahan-tany hafa.
Ireo tompona fampakaram-bady iraisam-pirenena dia mihamitombo hatrany amin'ny tiorka amin'ireo tanàna fialan-tsasatra any Mediterane sy Aegean.
Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN) ary Nancy Barkley, mpandrindra WTN ho an'ny fizahantany fampakaram-bady, dia manohana ny sehatry ny fizahan-tany ao Tiorkia rehefa mitodika any amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena fampakaram-bady mba hitazomana ny fahasitranana amin'ny valan'aretina COVID-19.
Tamin'ny taona 2019, nahatratra 34.5 lavitrisa dolara amerikana ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany any Torkia izay nahitana mpitsidika vahiny maherin'ny 45 tapitrisa. Tamin'ny taona 2020 anefa dia nahatratra 70% ny fatiantoka teto amin'ny firenena noho ny valan'aretina COVID-19. anio, fizahan-tany any Torkia Mitodika any amin'ireo fikambanana fampakaram-bady iraisam-pirenena amin'ity taona ity ny sehatra mba hitazomana ny fahasitranana amin'ny voka-dratsy ateraky ny areti-mifindra.
"Ny fikambanana fampakaram-bady dia mahazo tombony kokoa noho ny karazana fizahan-tany hafa," hoy i Nalan Yesilyurt, mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Fikambanana Tiorka Travel Agency, tamin'ny Xinhua. "Ny vola lany ao anatin'ny herinandro irery mandritra ny fikambanana toy izany dia mitovy amin'ny lanin'ny mpizaha tany mahazatra ao anatin'ny iray volana."
Nilaza izy fa aleon'ny tompon'ny mariazy vahiny kokoa ny tanànan'ny morontsirak'i Mediterane sy Aegean any Torkia izay manolotra tolotra “tsy manam-paharoa sy miavaka” any amin'ny hotely, marina ary trano fisakafoanana ambony. "Bodrum (any amin'ny faritany atsimoandrefan'i Mugla) dia namirapiratra toy ny kintana amin'ny ankapobeny miaraka amin'ny fiainana an-tranony mazava tsara, marina tsara, izay mahasarika yachts sy trano fisakafoanana miaraka amin'ny chef malaza," hoy i Yesilyurt.
Ny ben'ny tanànan'i Bodrum Ahmet Aras dia nilaza fa i Bodrum dia be fangatahana any amin'ny firenena Eoropeana sy Far Atsinanana, ary mahazo fankatoavana avy amin'ny firenena Arabo sy Moyen Orient ihany koa. Ny tanàna dia manana trano fandraisam-bahiny lehibe sy boutique miaraka amin'ny fahafahan'ny fandriana 1,000 mahery.
"Na eo aza ny fepetra sy ny fameperana amin'ny areti-mifindra, dia nampiantrano fikambanana fampakaram-bady 6 avy any India i Bodrum tamin'ity taona ity, izay tena nampanantena ny ho avy," hoy izy. Efa nanao fifampiresahana tamin’ireo orinasa mpikarakara iraisam-pirenena maromaro ny kaominina mba hisian’ny lanonana mariazy bebe kokoa amin’ny fotoana ho avy.
"Ny fanaovana lanonana fampakaram-bady any ivelany mandritra ny vanim-potoana izay ambany ny tahan'ny trano fandraisam-bahiny, dia mandray anjara betsaka amin'ny sehatry ny fizahan-tany ao Bodrum, miteraka fidiram-bola ary mampitombo ny asa. Ireo mpitsidika tonga any Bodrum amin'ny fampakaram-bady dia tsy mandany ny fotoanany amin'ny hotely ihany fa mandeha miantsena sy misakafo, manao hetsika maro, "hoy izy.
Mahazo tombony be ho an’ny mponina ny lanonana mariazy karana satria tsy mitsitsy vola ny tompon’ny mariazy mba hampiadana ny vahiny, hoy ny Ben’ny tanàna. "Matetika izy ireo no mamandrika ny hotely manontolo ho an'ny vahiny, izay tonga ao an-tanàna miaraka amin'ny fiaramanidina lehibe," hoy izy nanampy.
Mazàna izy ireo no mandany herinandro ary mankafy ny hatsaran-tarehy voajanahary sy ara-kolontsaina ao amin'ny faritra. Ny fanofana yacht sy ny fitsangantsanganana amin'ny sambo hijerena ireo helodrano tsy voakitika dia lasa hetsika malaza indrindra amin'ny mpitsidika.
Miaraka amin'ny fanampin'ny sidina iraisam-pirenena mivantana kokoa avy amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao amin'ny vanim-potoana ho avy mankany amin'ny seranam-piaramanidina Bodrum, ny tanàna dia manantena ny hisintona "mpitantany lafo vidy".
Ny fiparitahana haingana ny raharaha COVID-19 isan'andro manerana ny firenena, na izany aza, mampanahy ny solontenan'ny fizahantany sy ny tompon'andraikitra ao an-toerana. "Ny fanafoanana famandrihana rehetra dia midika fatiantoka lehibe ho an'ny indostria iray manontolo," hoy i Aras.